Beesha Caalamka oo ka hadashay doorashooyinka dalka Soomaaliya - Jowhar somali news leader
Home NEWS Beesha Caalamka oo ka hadashay doorashooyinka dalka Soomaaliya
Beesha Caalamka oo ka hadashay doorashooyinka dalka Soomaaliya
Dalalka daneeya arrimaha Soomaliya iyo hay’ado caalami ah oo ay ka mid yihiin Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Canada, Denmark, Jabuuti, Itoobiya, Midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urur-Goboleedka (IGAD), Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holand, Norway, Qadar, Iswiidhan, Iswisarland, Turkey, Boqortooyada Midowday ee Britain, Dowladda Maraykanka, iyo Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ugaga hadleen arrimaha doorashooyinka iyagoo ku baaqay in wadahadal ay yeeshaan.
Qoraal ka soo baxay beesha Caalamka ayaa waxa ay ugaga hadleen arrimaha doorashooyina.
Arrimaha ku saabsan codeynta/doorashada 2020/21 ee heer federaal, waxaan carrabka ku adkeynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar-oggolka kaas oo horseeday heshiisyo la gaaray intii lagu guda jiray wadatashiyadii u dhexeeyay madaxda Dowladda Federaalka ah iyo Dowlad Goboleedyada ee ka kala dhacay Dhusamareeb iyo Muqdisho.
Waxaan dhiirigalinaynaa wadahadal waara oo ku jaan-go’an habka-shaqo ee u degsan Golaha Wadatashiga Qaranka, wadahadalkaas oo lala yeesho saamilayda kale ee muhiimka ah si geedi-socodka doorashada loogusii ilaaliyo tubtiisa, uuna u noqdo mid loo wada dhanyahay.
Waxaan si gaar ah u sii adkeynaynaa in xaqiijinta wadar-oggol laga gaaro dhismaha guddiyada maamulka doorashooyinka, oo ay tahay in boqolkiiba 30 ay ku jiraan matalaadda haweenka, iyo xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalka uga dhacayso gobolka Gedo iyo [xal u helidda] kuraasta loo qoondeeyey beelaha Somaliland, ay muhiim u yihiin daahfurnaanta, sharciyadda, suurtagalnimada iyo hirgelin waqtigeeda ku dhacda ee geedi-socodka doorashada.
Waxaan ugu baaqeynaa madaxda DFS iyo DGXF, guddiyada maamulka doorashooyinka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah inay qaadaan dhamaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo in ugu yaraan boqolkiiba 30 Xildhibaanada iyo Senetarada ka imaanaya beel kasta ay yihiin haween isla markaana doorashadu ku dhacdo waqtigeeda.
Previous articleBeesha Caalamka oo soo dhoweysay doorashadii ka dhacday Dowlad Goboleedka Hirshabelle
Next articleRW oo xilka ka qaaday Wasiirkii Arrimaha Dibadda Cawad, laguna bedelay
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay oo loogu baaqay inuu soo farageliyo khilaafka ka jira Wabiga Niile